Ganacsi kasta oo leh xayeysiis xaddidan iyo suuqgeyn suuqgeyn ah ayaa kuu sheegi doona in tixraacyadu ay yihiin kanaalkooda ugu faa'iidada badan ee lagu helo macaamiil cusub. Waan jeclahay gudbinta maxaa yeelay meheradaha aan shaqeeyay waxay fahmayaan awooddeyda wayna aqoonsan karaan asxaabtooda waxay ubaahan yihiin gargaar aan bixin karo. Ma aha in la xuso in qofka aniga ii tilmaamaya horayba loo aaminay talo soo jeedintooduna waxay leedahay tan miisaan ah. Layaab ma leh in macaamiisha la soo gudbiyey ay si dhakhso leh u iibsadaan, wax badan ku qaataan, una gudbiyaan asxaabta kale:
Warbixintaada ku jirta Warshadda Gudbinta wuxuu awood kuu siinayaa inaad ilgaar ah ku hayso koritaanka barnaamijka gudbinta si aad had iyo jeer uga feejignaato cidda ku soo gudbisay ee kuugu sarreysa. Waad ka heli kartaa xogtaada muraayada ama waxaad ku diri kartaa webhook - sidoo kale waad u dhoofin kartaa xogtaada wakhti kasta adoo ah feyl CSV ah.
Sare: U Samee Liis Sugan B2B Xaqiiq ah Ololaha Awoodda iyo Iibinta Xir